Ikhabethe ledolobha elingu-1br elinomlando elinobhavu oshisayo nokubukwa - I-Airbnb
Ikhabethe ledolobha elingu-1br elinomlando elinobhavu oshisayo nokubukwa
Estes Park, Colorado, i-United States
I-indlu eyakhiwe ngamapulangwe ephelele ibungazwe ngu-Nancy
Thulisa umphefumulo wakho kubhavu oshisayo ngenhla kwedolobha ngenkathi ugqolozele e-Rocky Mountain National Park ngemva kosuku olude lokuqwala izintaba (STR#3126)! Uzoyithanda ikhabethe lami lomlando, elakhiwe ngasekupheleni kwawo-1800s kodwa lenziwa libe simanjemanje ukuze ukhululeke. Izinyawo zayo ezithokomele eziyisikwele ezingama-540 zinikeza ukubukwa okuhle, ikhishi eligcwele nendawo yokugezela, indawo yomlilo, igumbi lokulala elimemayo nelifudumele, kanye nompheme obheke eLumpy Ridge.
+ Hamba uye edolobheni naseStanley Hotel
+ 8 imizuzu yokushayela ukuya epaki
Isisekelo esihle sabantu abangafika kwabangu-4 ukuze ubalekele entabeni!
Ngokushesha kwangempela -- eminye imithetho yasekhaya:
Akukho ukungena ngaphambi kwesikhathi noma ukuphuma sekwephuzile. Ukungena kungo-4pm noma kamuva; ukuphuma ngo-10am noma ngaphambi kwalokho. Akukho ukubhema ngaphakathi nangaphandle; azikho imigodi yomlilo; awekho amaqembu; azikho izilwane ezifuywayo. 2 izimoto nezivakashi ezingu-4 ubuningi. Izivakashi kufanele ziqale umshini wokugeza izitsha kanye nempahla yokuwasha amathawula/indwangu yezandla/indwangu yokuwasha lapho usuphuma (sixoxisane ngenkokhelo ephansi yokuhlanza ngokusekelwe kulokhu). Isibalo esinembile sezihambeli siyadingeka futhi inkundla ngeke ikhiqize inani elilungile ledethi yakho. I-AWD, amathayi eqhwa noma i-4WD enconyiwe kusukela ngo-Okthoba kuya kuMeyi. Ubhavu oshisayo ovula unyaka wonke. Futhi ayikho ikhebula -- letha ama-akhawunti akho okusakaza-bukhoma e-smart TV.
Ikhabethe lami lihlezi egqumeni ngenhla kwedolobha endaweni encane yamanye amagumbi omlando. Lena kwakungenye yezindawo zokuqala lapho abantu beqala ukuzinza e-Estes Valley. Le ndawo yandulela ezinye izakhiwo eziningi endaweni, kodwa inakekelwa ngothando futhi isesimweni esihle kakhulu.
Ngiyathanda ukukwazi ukuya edolobheni ngisuka lapha, kodwa ngisaya ekhaya ngemva kwalokho futhi ngihlale kubhavu oshisayo. Ngemva kwalokho, ngijabulela ukuhlala kusofa futhi ngizipholele nje phambi kweziko.
Akhona amanye amakhabethe aseduze, ngakho-ke uma ufuna ukuhlala wedwa lokhu akukona ukubheja kwakho okuhle -- kodwa azikho izindawo zokuvakasha eziningi eziqashiswayo ezinikeza inhlanganisela enhle yokubuka, ubhavu oshisayo, indawo yokucima umlilo, indawo yokudlela, egcwele. ekhishini, kanye nekhono lokuya edolobheni.
Ikhaya lami linikeza igumbi lokulala elingu-1, kanye nokulala amanye amabili kuma-ottoman amabili e-Ikea aguqulela emibhedeni eyodwa.
Igumbi lokulala 1 - Umatilasi onethezekile uzoqinisekisa ukulala kahle ebusuku ngemuva kosuku olude lokuhamba ngezinyawo. Yindawo ethokomele enezindonga ezinamekwe ngokhuni kulo lonke, namafasitela abheke enyakatho ukuze ukwazi ukubuka ilanga likhanyisa i-Lumpy Ridge njengoba uvuka.
I-Living Room - Kunetafula legumbi lokudlela elibanzi kanye nosofa onethezekile ongahlala kuzo ngenkathi usakaza uchungechunge lwakho lweNetflix oluyintandokazi ku-WiFi esheshayo. Zizwe ukhululekile ukuthungela iziko -- igesi kodwa inikeza i-ambiance enhle njengoba ilangabi livutha ezindongeni zezinkuni ezithokomele.
I-Deck & Hot Tub - Sinedekhi encane ene-grill emnyango ongaphambili ebheke i-Lumpy Ridge, indawo ekahle ye-BBQ. Ubhavu wethu oshisayo ulingana okubili ngokunethezeka kodwa ungakwazi ukushutheka kakhulu uma kudingeka. Inothango oluncane oluyizungezile ukuze ibe yimfihlo emakamelweni omakhelwane bethu, kodwa uhlangothi olusenyakatho luvulekile ukuze ukwazi ukubuka izintaba.
Ikhishi - Ikhishi ligcwele izitsha, izinto zikagesi ezincane, ifriji, ifriji, ihhavini egcwele usayizi nesitofu, i-microwave, i-drop coffee maker, i-toaster, nokunye. Ungase ungayisebenzisi kangako ngoba ungaya kuzo zonke izindawo zokudlela ezinhle edolobheni!
Iwasha - Sikunikeza iwasha engusayizi ogcwele kanye nesomisi ongasisebenzisa!
Ikhabethe lami lisendaweni yamanye amakhabethe anomlando egqumeni ngenhla nje kwedolobha i-Estes Park. Ungakwazi ukuhamba ngokoqobo yonke indawo edolobheni -- ukuya e-Stanley Hotel, Ed's Cantina, izitolo zekhofi zendawo nezindawo zokudlela, njll. Ngenxa yokuthi intaba, unokubuka okuhle kwe-Lumpy Ridge ukuya enyakatho ukusuka kudeski nobhavu oshisayo.
Ngihlala amamayela ambalwa futhi ngiyindawo yase-Estes Park isikhathi eside. Umyeni wami ungumdayisi omkhulu (ungazise uma uthanda ukuthuthela lapha!) futhi ngifundisa i-yoga futhi ngibambe iqhaza kumaphrojekthi amaningi omphakathi. Ngiyajabula ukuphendula noma imiphi imibuzo onayo -- ngiwumbhalo osheshayo!
Ngihlala amamayela ambalwa futhi ngiyindawo yase-Estes Park isikhathi eside. Umyeni wami ungumdayisi omkhulu (ungazise uma uthanda ukuthuthela lapha!) futhi ngifundisa i-yoga futhi…
Ulimi: Sign Language
Hlola ezinye izinketho ezise- Estes Park namaphethelo